Uma ngemuva kokungena ukungena, ushintshe ingqondo yakho, ungase uhoxise imvume yakho ukuba uxhumane nawe, ngokuqoqwa okuqhubekayo, ukusetshenziswa noma ukudalulwa kolwazi lwakho, nganoma yisiphi isikhathi, uxhumane nathi
Ukuze uthole ukuqonda okuningi, ungase futhi ufune ukufunda imigomo yesevisi ye-Shopify lapha noma Isitatimende Sobumfihlo lapha.
Uma usinikeza ngolwazi lwakho lwekhadi lesikweletu, ulwazi lubethelwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokungqimba kwesokhethi esiphephile (I-SSL) futhi igcinwe ngokubethela kwe-AES-256. Nakuba kungekho ndlela yokudlulisela phezu kwe-intanethi noma isitoreji se-elekthronikhi i-100% ivikelekile, silandela zonke izidingo ze-PCI-DSS futhi sisebenzisa amanye amazinga embonini evunyelwe ngokuvamile.
Nasi uhlu lwamakhukhi esiwasebenzisayo. Sibahlule lapha ukuze ukwazi ukukhetha uma ufuna ukuphuma kwamakhukhi noma cha.
Uma ungathanda: ukufinyelela, ukulungisa, ukulungisa noma ukususa noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esinalo ngawe, ubhalise isikhalazo, noma ufune nje olunye ulwazi uxhumane nathi